Updated: 2016-06-06 14:14
အိုဒို ပန်း ဥယာဉ်
နွေဦးရာ သီ မှာ ဆာခုရာ ( ချယ်ရီ ) ၊ နွေရာ သီ မှာ ရေဆော့ ကစား ၊ ဆောင်းဦး မှာ ပျော်ပွဲစား နဲ့ BBQ အစရှိတဲ့ မျိုး စုံ ကို မိ သား စု နဲ့ အတူ ပျော် ရွှင် စွာ ဆင် နွဲ နိုင် ပါတယ်။ ဘေ့စ်ဘော ကွင်း ၊...
Updated: 2016-06-06 14:02
ကိုးအိ နော့ ခိ နတ်ဘုရားကျောင်း ၊ဂျပန် နိုင်ငံ နာပါတ်ဝမ်း ရေစက် နဲ့ ပျော်ရွှင် မှု တို့ စုံ စည်း ရာ
မိဇု တ တဲန်း မဲန်း ဂု နဲ့ ကိုးအိနော့ခိ နတ် ဘု ရားကျောင်း ဟာ ခရူး ရှူး ရဲ့ အကြီး ဆုံး တဲန်းမဲန်းဂု ( နတ်ကွန်း ) ၂ခု ထဲ က တစ် ခု အပါ အ၀င် ဖြစ် ပြီး တော့ ဆုဂ၀ါရ နတ် မင်း ကြီး ကို ရည် စူး တည် ထား တ...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များဂပြနျဥယြာဉျတျောဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊
Updated: 2016-05-30 13:45
ဖုခုအိုး က မြို့ တော် နဲ့ ကပ် ရပ် မှာ တည်ရှိ တဲ့ အိုတိုရှိမ မြို့ တော် မြောက် ပိုင်း မှာ တည် ရှိ တဲ့ စခုရိုင်း အိ ဖုတမိ ဂရိ ရ ။ ကျောက် တုံး လင် မယား လို့ ခေါ် ဆို တဲ့ ပင် လယ် ကမ်းစပ် က နေ မီတာ ၁၅၀ လော...
Updated: 2016-05-10 16:19
ရှိရတို ရေတံခွန် နဲ့ ဖုရဲအိုင်အိ စတိုး
ဖုခုအိုကခရိုင် ရဲ့ နာမည် ကြီး နေရာ တစ် ခု ဖြစ် တဲ့ ( ရှိရတိုး ရေတံ ခွန် ) ။ အမြင့် ၃၀ မီတာ ခန့် ကနေ အဖြူ ရောင် ရေ မှုန် ရေမွှား တွေ နဲ့ စီး ဆင်း ကျ ဆင်းနေ တဲ့ ရေတံခွန် ကြီး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွေ...
Updated: 2016-05-09 15:14
ဂျပန် နိုင် ငံ အနောက် ပိုင်း ခရိုင် ရဲ့ နာပါတ် ၀မ်း မြို့ ပြ
နာက မြစ် နဲ့ ဟာကတ မြစ် တို့ က၀န်းရံ ထား ပြီး အရှည် ၁ ကီလိုမီတာ ၊ အကျယ် ၂၀၀ မီတာ ရှိ တဲ့ မြို့ တွင်းဒေသလေး ဖြစ် ပါတယ်။ နာကစု ရဲ့ မွေး ဖွား ချင်း အစကတော့ ဖုခုအိုးက မြို့ တော် ကို စတင် တည်ေ ထာင် သူ စစ်သူ...
Updated: 2016-04-28 16:59
နာရီတာ တောင် ခူးရူးမဲ ဘွန်းအင်း
ခူးရူး မဲ မြို့ ရဲ့ သင်္ကေတ လို့ တောင် ပြော လို့ ရတဲ့ အမြင့် ၆၂ မီ တာ ရှိ တဲ့ ကွမ် ရင်မယ် တော် ၇ုပ် ထု ကြီး နဲ့ ကောင်း ကင် ပြာ ကို နောက် ခံ ထား တဲ့ ဒီ အဖြူေ၇ာင် ရုပ် ထု က တော့ စိတ် ဓါတ် ကို...
Updated: 2016-04-18 15:40
နန်းဇိုးအင်း ဘုရားကျောင်း ဟာ စာစဂုရိ ရှင်း ရှိကိုခု လဲဂျော ရဲ့ ရုံးချုပ် ဖြစ် ပါတယ်။ ပတ် ၀န် ကျင် က လှပတဲ့ ဖုခု အို က ခရိုင်စာစဂုရိ မြို့ မှာ တည် ရှိ ပါတယ်။ နန်းဇိုးအင်း ကို ကိုယ်စားပြု တဲ့ လျောင်းတေ...